Shoutcart: Fomba tsotra hividianana kiakiaka avy amin'ireo mpikatroka media sosialy | Martech Zone
Mitombo haingana haingana ny fantsona nomerika, fanamby ho an'ny mpivarotra na aiza na aiza rehefa manapa-kevitra izay hampiroboroboana sy ny toerana hampiroboroboana ny vokatra sy ny serivisiny amin'ny Internet izy ireo. Rehefa mitady hanatratra mpihaino vaovao ianao dia misy fantsona nomerika nentim-paharazana toy ny famoahana indostrialy sy ny valin'ny fikarohana… saingy misy ihany koa influencers.
Ny marketing influencer dia mitombo hatrany amin'ny lazany satria ny influencers dia nitombo tamim-pitandremana sy nikarakara ny mpihaino sy ny mpanaraka azy rehefa mandeha ny fotoana. Nitombo ny mpihaino azy ireo hatoky azy ireo sy ny vokatra entin'izy ireo eo amin'ny latabatra. Tsy misy lafy ratsiny anefa izany.
maro influencers dia olona manana mpanaraka be dia be... nefa tsy manana fahefana amin'ny isany. Nametraka ny tenako tao amin'io tsanganana io aho. Na dia manana mpanaraka betsaka aza aho, dia tsapan'ny mpanaraka ahy fa mampiseho sehatra amin'izy ireo aho mba hahafahan'izy ireo manao fikarohana fanampiny sy hahitana raha mety izany. Vokatr'izany dia mety hahazo kitiho be dia be amin'ny mpanohana na rohy mifandray aho… fa tsy voatery hividy. Tsy maninona aho amin'izany, ary matetika aho no eo aloha amin'ireo mpanao dokam-barotra izay manatona ahy amin'ny fanentanana momba ny marketing influencer.
Misy ampolony marketing marketing sehatra any ivelany, maro amin'izy ireo no saro-takarina amin'ny fampiharana fampielezan-kevitra, porofon'ny analyse, rohy fanaraha-maso, sns. Amin'ny maha influencer ahy dia matetika aho no mitsambikina ireo fangatahana ireo satria ny fotoana ilaina amin'ny fampiharana sy ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa dia tsy mendrika ny vola azony. dia manolotra fanentanana mahomby. Shoutcart ny mifanohitra amin'izany aza… mitadiava mpikatroka fotsiny, mandoa vola amin'ny antsoantso, ary diniho ny valiny. Shoutcart dia manolotra ireto endri-javatra sy tombontsoa manaraka ireto:
Fanentanana azo scalable - Shoutcart dia manolotra ny fahafahana manafatra antsoantso avy amin'ny influencers maro indray mandeha. Mividiana hiaka ambany amin'ny dolara vitsivitsy, ary mihoatra ny $10k isaky ny mandeha.
Demografika mpanaraka - Sivana ny mpanaraka amin'ny fiteny, firenena, taona, lahy sy vavy ary mamela anao hisafidy mpikatroka manaraka izay mifanaraka amin'ny mpihaino kendrenao.
Fanaraha-maso sy Metrika - Ny fanaraha-maso sy ny antontan'isa dia azo alaina amin'ny fampielezan-kevitra rehetra, fantaro tsara hoe iza amin'ireo influencer no mitondra ROI betsaka indrindra, ary aza mandany ny teti-bolanao.
Bigger Bang ho an'ny Buck - Ny varotra influencer dia tsy lafo ary azo antoka kokoa noho ny toerana mahazatra! Afaka manomboka amin'ny Shoutcart amin'ny $10 fotsiny ianao!
Fanamarinana isan'andro - Manara-maso ny mpikatroka isan'andro ny Shoutcart mba hahazoanao fampahalalana mangarahara momba ny olona iarahanao mba hanamafisana ny vokatra!
Shoutcart dia misy influencers avy amin'ny Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ary Facebook.
Ahoana ny fandefasana ny fanentanana Shoutcart voalohany anao
Tsy mila antso sy fifanarahana amin'ny varotra, Shoutcart dia fivarotana an-tserasera amin'ny fividianana hiaka influencer. Toy izao ny fomba hanombohana:
Tadiavo ireo mpampita - Mikaroka mpikatroka an'arivony ao amin'ny Shoutcart, avy eo mifidiana vitsivitsy izay mifanandrify indrindra amin'ny niche na tolotrao. Azonao atao ny misafidy amin'ny sokajy, ny haben'ny mpihaino, ny demografika mpanaraka na mikaroka fotsiny amin'ny teny fototra.
atao anaty harona - Rehefa avy nisafidy ireo mpikatroka tsara indrindra, ampio ao anaty sarety izy ireo ary manomboka mamorona baiko!
Mamorona ny baikonao - Fenoy endrika tsotra ary ampidiro sary / horonan-tsary ho an'ny influencers alefa. Ampidiro ao amin'ny lohatenin'ny kaomandy ny solon'anarana na rohinao, mba hahafantaran'ny mpijery ny fomba hahazoana ny tolotrao.
Fandaharana sy mandoa - Safidio ny fotoana tianao hiantsoana, ary mandoa ny baiko. Avelao hatramin'ny 72 ora ny influencers hamoaka ny baikonao fa aza manahy, ny influencers dia tsy handefa alohan'ny fotoana tianao.
Mandray Exposure - Rehefa voaloa sy voalahatra ny antsonao dia hahazo ny hafatra avy amin'ny influencers nofidinao ianao! Mora izany!
Tsidiho ny Influencers amin'ny Shoutcart
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Shoutcart ary koa influencer amin'ny tambajotran'izy ireo.
Tags: mividy fanentanana marketing influencermividy horakorakamividy lahatsoratra amin'ny media sosialyFacebookfacebook influencersfanentanana marketing influencermarketing marketingplatform marketing marketingInstagraminfluencer amin'ny instagramsaretympanentana tiktokTwitterYouTubeinfluencers youtube
ConvertMore: Manova fitsidihana tranokala bebe kokoa miaraka amin'ity Widget antso an-telefaona ity